Malecones malaza eto amin'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | Toerana fitsangatsanganana, General
Androany dia hitsidika tsara tarehy vitsivitsy isika seawalls eto an-tany. Andao atomboka ny fitsidihana ao amin'ny Fiakarana an-tsehatra any Maltese Scenic Boardwalk, miorina ao amin'ny tanànan'ny seranan'i Manta, any Ekoatera. Ity boardwalk ity dia heverina ho iray amin'ireo zavatra manintona indrindra eto an-tanàna, ary manome fahitana miavaka amin'ny ranomasina.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo malaza indrindra ny Malecon Habanero, miorina ao amin'ny tanànan'ny Havana, any Kiobà. Ny arabe an-dalambe dia manana arabe enina andalana ary rindrina lava dia lava manitatra ny morontsiraka avaratra iray manontolo amin'ny tanàna mandritra ny 8 kilometatra. Ny boardwalk dia nanomboka tamin'ny 1901, ary iray amin'ireo toeram-pivoriana be mpitsidika indrindra eto an-drenivohitra kiobàna.
Ao amin'ny tanànan'ny Lima, renivohitr'i Peroa, no ahitantsika ny Malecon Cisneros, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Malecón de Miraflores satria any amin'ny distrikan'i Miraflores no mipetraka. Ity boardwalk ity dia mety amin'ny fitsangantsanganana, amin'ny fanaovana skating, amin'ny bisikileta na hankafizanao fotsiny amin'ny fiposahan'ny masoandro mahafinaritra eny ambonin'ny hantsana, mitazana ny Oseana Pasifika. Mandritra ny sakan-dalana dia hahita zaridaina isan-karazany isika, iray amin'ireo fanta-daza indrindra dia ny Parque del Amor, zaridainam-pitiavana, izay alehan'ireo mpitia.
Any Mexico, dia ampirisihinay hitsidika ny Malecon an'ny Puerto Vallarta, heverina ho iray amin'ireo mitaingina tsara indrindra eto amin'ny firenena. Ity arabe manara-penitra ity dia mihazakazaka manaraka ny helodrano ao amin'ny faritra afovoan'i Puerto Vallarta. Tsara ny manamarika fa hatramin'ny 1936 dia noheverina ho tsangambato ara-tantara izy io.
Any Mexico koa dia misy ny Malecon an'i Mazatlan, Ao Mazatlan. Izy io dia iray amin'ny morontsiraka lava indrindra eto an-tany satria 21 kilometatra ny fanitarana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Malecones malaza eto amin'izao tontolo izao
Tanàna matoatoa ao Fengdu